धरान स्काउट पनि पार्टी फुटे जस्तैगरी फुट्यो::Hamro Koshi Awaj / awaz
दुईवटा धरान तदर्थ समिति, दुवैले गरे आधिकारिता दावी
धरानः धरान स्काउट तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।
समितिको संयोजक अनुप तामाङ रहेका छन् । यस्तै, सदस्यहरुमा गोपाल पौडेल, सन्तोष कोइराला, रेवत पौडेल, पुष्पा राई, सुशिला राई, तुफान मगर, ओमकृष्ण उदास, अमित अग्रहरि, राजेन्द्र गुरुङ, मधुसुदन घिमिरे रहेका छन् । ‘धरानको लागि यो नै आधिकारिक तदर्थ समिति हो’, संयोजक तामाङले भने, ‘यसअघि बनाइएको तदर्थ समिति असन्तुष्ट समूहले बनाएको हो । केन्द्र र प्रदेशको आधिकारिक चाहिँ हाम्रै संयोजकत्वमा बनेको समिति नै हो ।’
प्रदेश नं. १ सदस्य हेमन्त भण्डारीले पनि यसअघि बनेको तदर्थ समिति आधिकारिक नभएको दावी गरे । ‘असन्तुष्ट समूहहरु मिलेर गठन भएको समिति कसरी आधिकारिक हुन्छ’, उनले प्रश्न गरे । उनले यो समिति स्काउटको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका साथै नेपाल स्काउटको प्रचलित ऐन, नियम तथा राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयका नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि अघि बढिरहेको छ ।
यसअघि धरानमा अर्कै तदर्थ समिति गठन भएको थियो । वीरेन्द्रबहादुर शाहको संयोजकत्वमा सोमबार अर्को तदर्थ समिति गठन भएको थियो । उनको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय नगर स्काउट तदर्थ समिति धरान गठन भएको थियो । उनीहरुले पनि आफूहरु नै आधिकारिक हो भन्दै आएका छन् ।
समितिको सदस्यहरुमा शंकर भण्डारी, उमेशकुमार कार्की, ईश्वरराज अर्याल, शान्ति राई, प्रियङ्का भण्डारी, बब्लुकुमार शाह, दीक्षा राई, कविन श्रेष्ठ, वसन्ती थेवे, राजबहादुर लिम्बू, सचिन राई, सुनिता राई, अनुपा प्रधानाङ्ग, सूर्यबहादुर सुनुवार, सन्तोष कोइराला, प्रकाश राई छन् ।
नेपालमा वि.सं. २००९ सालमा स्थापना भएको संस्थाले विभिन्न आपदविपदमा सहयोग गर्नुका साथै विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ ।
नेपालका बालबालिका तथा युवा वर्गलाई स्काउटमा आधिकारिक मात्रामा सहभागी गराई तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गरी तिनीहरूलाई अनुशासित र स्वावलम्बी बनाई देश विकास कार्यमा सहभागी गराउन नेपाल स्काउटको स्थापना भएको बताइन्छ ।